Android P inogamuchira June chengetedzo kugadzirisa | Linux Vakapindwa muropa
Android P inogamuchira yekuchengetedzwa kweJune, inosanganisira kuvandudzwa kwePixel zvishandiso
Kufanana nemwedzi wega wega, Google yakaburitsa nyowani yekuchengetedza yekushandisa kwayo nhare yekushandisa. Iyo yekuvandudza inosanganisira zvigamba 2019-07-01 uye 2019-07-05 izvo zvava kuwanikwa kugadzirisa huwandu hwenzvimbo dzekuchengetedza makumi matatu nematatu dzinokanganisa Android-P, kunyanya kuhurongwa, maraibhurari, multimedia furemu uye zvikamu zveQualcomm, kusanganisira izvo zvisiri open source. Kubva pane zvatinoverenga mu kusunungura chinyorwa, pane kana chimwe chete chakakundikana kutadza.
Icho chiri pamusoro kunetsekana kwakakomba muchimiro chemultimedia iyo inogona kubvumidza munhu ari kure kuti ashandise faira rakanyatsogadzirirwa kuita kodhi yekumanikidza mune mamiriro ehurombo. Sekuzivisa kweGoogle, «lKuongororwa kwekuomarara kunoenderana nemhedzisiro yekushandisa kusagadzikana kunogona kuve pane chakakanganiswa mudziyo«, Zvinoreva kuti inogona kushandiswa zviri nyore (sekureba semunhu anorwisa aine ruzivo rwakakodzera rwakaedzwa).
Android P inogadzirisa kushushikana kwakanyanya muna Chikunguru
Iyo Android P Chikunguru inogadziridza zvakare inosanganisira zvinotevera zvinotevera kuvandudzwa kwePixel zvishandiso:
Kugadziridzwa mukucherechedzwa kwemirairo "Ok Google" uye mukuonekwa kwemimhanzi mune ese maPixels akatsigirwa.
Yakagadziriswa bhagi pane iyo Pixel 3 uye Pixel 3 XL iyo inogona kukonzeresa kuti mudziyo ubatike kana uchitanga iyo inoshanda sisitimu.
Yakagadziriswa bhagi pane iyo Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a uye Pixel 3a XL iyo yakakonzera kuti inamate muEDL modhi pane isina chinhu skrini.
Yakagadziridzwa rutsigiro rweJapan Unicode.
Yakavandudza mashandiro eTitan M module paPixel 3, Pixel XL, Pixel 3a uye Pixel 3a XL.
Google yatove kuzivisa kuburitswa kweyekuvandudzwa kwekuchengetedzwa kwaChikunguru kweApple P, zvinoreva kuti yatotanga kusvika kune vashandisi vekutanga. Kufanana nezvimwe zvaburitswa, kusvika kwacho kunozoita zvishoma nezvishoma uye kunoonekwa pane ese madhijitari akatsigirwa mumazuva anotevera. Wakatove uri mumwe wavo here?
Android P May yekuvandudza inosanganisira makumi matatu ekuchengetedza maratidziro
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Android P inogamuchira yekuchengetedzwa kweJune, inosanganisira kuvandudzwa kwePixel zvishandiso
kuvhuraSUSE Leap 42.3 inosvika kumagumo ekutenderera kwayo, gadziridza izvozvi
Mageia 7 ikozvino yavapo, kuchine 32-bit vhezheni